एक ७ वर्षकी बालिकाको घाँटीमा एक घण्टा सम्म यसरी नाग बेरिएर बस्यो,त्यसपछि…. – Sunaulo Nepal TV
एक ७ वर्षकी बालिकाको घाँटीमा एक घण्टा सम्म यसरी नाग बेरिएर बस्यो,त्यसपछि….
एजेन्सी । भारतको महाराष्ट्रको वर्धा जिल्लाको सेलु तालुका बोरखेडी कलानमा अनौठो घटना भएको छ । एक ७ वर्षीया पद्माकर गडकरी राती घरमा सुतिरहेकी थिइन्। राती ११ बजेतिर एउटा कोबरा घाँटीमा बेरिएर बस्यो । उनी निदाइरहेको बेला कोबरा आएको थियो । उनले आफ्नो फन बाहिर निकालेर फैलाएको थियो ।
करिब एक घन्टा सम्म त्यसरी कोबरा बस्यो । जब बालिकाको आँखा खुल्यो आफ्नो आँखै अगाडी त्यस्तो दृष्य देखेर उनी कराइन् । उनको आवाज सुनेर घरका परिवारका सदस्य पनि सबै उठे । आफ्नो ७ वर्षकी छेरीको त्यस्तो हालत देखेपछि परिवारका सदस्यहरु पनि कराए ।
उनका आमा बुबा उठे र उनीहरुको अगाडिको दृश्य देखेर हैरान भए। आवाज सुनेपछि छिमेकीहरु घर पुगे र अगाडिको दृश्य देखेर उनीहरु पनि डराए । उनीहरुले स र्प बोलाउनेलाई घरमा बोलाए । उनले पनि त्यसलाई बाहिर निकाल्न सकेनन् । ति साथीले भने की यो एक कोबरा हो जसलाई नाग भनेर पुजा गरिन्छ ।
केटीको घाँटीमा करिब एक घण्टा सम्म नाग बसिरहेको थियो। बालिका लगातार लामो समय सम्म त्यसरी बस्न सकिनन् । उनी डराएर चलिन् । जब बालिका चलिन् त्यो नागले उनलाई टो क्यो । त्यसपछि ढोकावाट बाहिर निस्कियो । ती बालिकालाई उपचारको लागी सेवाग्राम अस्पताल लगिएको थियो जहाँ उनको उपचार सुरु भयो।
Previous धोका दिने श्रीमानको नीजि अंगमा श्रीमतीले जब नट बोल्ट लगाइदिइन्
Next संसदमा ओलीले आफै रोष्टम अगाडी गरे नारावाजी, कसरी विरोध गर्ने भन्दै आफ्ना सांसदलाई दिए निर्देशन